Inbound Marketing na-ebili | Martech Zone
Ndi akwukwo na Pamorama arụọla ọrụ dị egwu na nke a infographic nke ahụ na-enye nghọta maka ihe kpatara ịbata ahịa inbound ji bụrụ atụmatụ dị mma karịa ahịa ahịa na-apụ apụ… site n'echiche ndị ahịa.
Ọ bụ ezie na mbọ inbound chọrọ ntinye na oge iji wuo ngwa ngwa, enweghị ụzọ ọzọ dị ọnụ ahịa iji nweta nnukwu ndị ahịa zụrụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị.
Tags: inbound marketingInfographics Ahịaahia n'èzíadịghị ama
Jul 5, 2012 na 8:28 PM
Nke a bụ nnukwu infographic. Ekwenyere m kpamkpam na ị kwuru nke ahụ
ozi nke dịịrị ndị ahịa ugbu a nwere ike ịpụ
ahịa na-aga n'ihu na-adalata. Na abata
ahia nwere ike bụrụ ihe ọjọọ nye ụfọdụ, mana ọ na - enye ndị ahịa ahụ ike.